Danjire Baashe: Miyuu Dhibbane Ka Noqon Karaa Hoos-udhaca Xasuusta Siilaanyo! W/Q Siciid Maxamuud Gahayr
Saturday November 03, 2018 - 03:15:48 in Wararka by Super Admin
Danjire Baashe Cawil Xaaji Cumar waa safiirka Somaliland u fadhiya dalka Kiiniya, waxa uu la xidid yahay qoyska Madaxweyne Siilaanyo isaga oo ay xaaskiisa tahay mid ka mid ah hablaha uu dhalay madaxweynihii hore ee Somaliland. Intii aanu Siilaanyo no
Ugu dambayntii waxa loo magacaabay wakiilka Somaliland ee waddanka Imaaraadka. Markaasna waxa sii kordhay saamayntii uu xukuumadda ku lahaa. Weedhaha laga yidhi xilka loo igmaday waxa ka mid ahaa in Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen uu yidhi "Haddii aan ahay Baashe Cawil, ma qaateen xil uu soddoggay ii xulo”.
Indhaha ayaan la raacay meesha uu masuulkaasi weedha ka tebinayo. Marka uu meesha soo gelayo waxa uu celiyay albaabkii kobta uu xogta ka sheegayo. Kolkii aan sii dheehday waxa irrida ku xardhanayd "Siilaanyo Villa”. Masuulku shaw markii madaxtooyada laga soo guuray waxa uu u wareegay guriga soddoggii/soddohdii ay u soo geeddiyeen. Weli waxa uu yaallaa aqal ay 98% innagu adag tahay inaynu ku negaanno ama seexanno.
Maanta ayuu mar kale hadlay Danjire Baashe Cawil Xaaji Cumar isaga oo sheegaya in qoyska Siilaanyo ay maxkamad la geli doonaan Hoggaamiyaha Xisbiga Waddani Md Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxa uuna daadifeeyay xogta ku qoran dhiganaha Miyiga Illaa Madaxtooyada (Socdaalkaygii Guusha) ee 26kii Oktoobar 2018ka lagu daahfuray Hargeysa. Illeen hadal "ax” kuma yidhaahdo.